1220mm PC Pe PP mhango jira kugadzira muchina - China Qingdao Hegu Wood-Plastic
PC / Pe / PP Hollow Grid Plate Extrusion Line, PP mhango jira kugadzira muchina, PP mapatya rusvingo jira kugadzira muchina, PP chiputiriso bhokisi kugadzirwa mutsetse, PP corrugatd S ...
Machine mutengo: 100,000-150,000 USD FOB
Product zvinhu: PP Pe PC zvinhu
Product upamhi: 1220mm
Product ukobvu: 2-8mm
Power kunwa: 200KW
PC / Pe / PP Hollow Grid Plate Extrusion Line, PP mhango jira kugadzira muchina , PP mapatya rusvingo jira kugadzira muchina, PP chiputiriso bhokisi kugadzirwa mutsetse, PP corrugatd papepa nokuparira Machine
Izvi PP mhango jira dzaFord anoziva kuramba kugadzirwa PC / Pe / PP mhango afoot ndiro, ndiro kushandiswawo kuvaka kushongedzwa, vanoshambadza collocation, uye ruzha mudziye mugwagwa uyewo kavha. Pe / PP mukaha afoot ndiro chinhu yakanaka chinotsiva bepa bhokisi mukuita kavha bhokisi. It kunoratidzwa chiedza kurema, mukuru zvikuru, mai-uchapupu, uye kuvenga ngura. Upamhi zvigadzirwa ndiyo 1220-2100 neMM, uye pakukora ndiyo 2 mm-12 mm.
Machine mifananidzo PP mhango jira extrusion mutsetse:
1,Material mixing silo for PP mhango jira kugadzira muchina : it is used for mixing PP material with filling masterbatch and color masterbatch
2, Extruder nokuti PP mhango jira kugadzira muchina: The yakarongerwa sikuruwa uye akura kutonga maitiro nechokwadi kwazvo palatalization, mukuru goho uye irambe extruding.
kana mutengi uchida kushandisa recyle zvinhu, isuwo tinogona pa co-extrusion mutsetse kuita kaviri rukoko PP mhango jira, mukati rukoko anogona kushandisa zvishandiswezve PP zvinhu, uye chapamusoro anogona kushandisa itsva PP zvinhu.
3, uchafa musoro uye chakuvhuvhu nokuda PP mhango jira kugadzira muchina: tinogona pa ari kufa musoro
Chinovhara kuchinja nokuti PP mhango jira kugadzira muchina :Quick chinovhara kuchinja kwezvinhu hydraulic hurongwa chendangariro pfupi kosi chinovhara changed. Double-nzvimbo pamwe chaiyo chisimbiso mamiriro hunovimbisa kugadzikana nokushanda chinovhara kuchinja.
Mould: chakuvhuvhu adopts yepamusoro chiwanikwa simbi uye throttling mudziyo kuitira kunyange kumanikidzwa zvokudya influent panguva Foroma miromo, uye differential chiito anosvika-pasi chidimbu zvinovimbisa kunyange ukobvu nendiro.
Vacuum calibrating tafura PP mhango jira kugadzira muchina: muchidziisa kupanana uye kutonhora gadziriro anokurumidza nokukurumidza munyika calibrating ino chinjana zvinobudirira uye zvausingafungi vacuum maitiro, iyo dzinovimbisa calibrating zvakarurama. Vacuum hurongwa composes maviri akazvimirira subsystems uye mumwe ari vakapakata vanoverengeka wakaiswa achiparadzira Vacuum akarongwa-pfungwa nhatu mhando. Zvichakadai, mutsetse mumwe anotakura Vacuum ndangariro maitiro uye Vacuum vanoratidza gadziriro kuti kuziva kunyange uye irambe Vacuum mwero ndiro pemvura.
Tractor nokuti PP mhango jira kugadzira muchina : Pane nematarakita anofamba maviri. Wokutanga zvakakwirira simba, mukuru rutapudzo reshiyo, multi-chinotenderera mhando, zvakanaka yakaderera-nokukurumidza oparesheni, mukuru traction uye anokwanisa kuwana ndiro kubva patafura calibrating zvakaenzana uye synchronous. Wechipiri akagadzirirwa kubvisa kunetseka, uye Kuwedzera zvinonzi vakapakata unopinza-cheka mudziyo inonzi paine upamhi uye anotsvedzerera chekawo pamusoro kumicheto.
Stress remover nekuti PP mhango jira kugadzira muchina : The yepamusoro guru nzvimbo conductive kudziyisa muoti anogona zvinobudirira kubvisa kunetseka kuti ndiro uye zvakare kuvandudza pachena nendiro.
Kucheka muchini PP mhango jira kugadzira muchina: Rakarurama pakarepo kureba-wakaiswa nokuveza uye otomatiki kumusoro-pasi zvaikosha ezvinhu pamwe chiwanikwa simbi unopinza chipande vanoziva dzakakwirira unhu cheka.
Final chigadzirwa uye chikumbiro chakaitwa PP mhango jira nokuparira Machine:
Previous: Plastic marara muchina PET mabhotoro marara Machine
Next: Plastic Profile muchina uPVC Profile Machine
Corrugated Plastic Sheet Ndakasarudza Machine
kaviri rukoko p papepa Machine
yori mhango shisha Machine
yori denga papepa Machine
Pe mhango shisha Machine
Pe denga papepa Machine
Plastic Box Kuita Machine
Plastic Bubble jira Ndakasarudza Machine
Plastic Roof jira Ndakasarudza Machine
Plastic Sheet unhani Machine
Plastic Sheet Counting Machine
Plastic Sheet Kucheka Machine Manufacturers
Plastic Sheet nekusimbisa, nebefu Machine
Plastic Sheet achiita zvokutemera Machine
Plastic Sheet vachikuya Machine
Plastic Sheet Ndakasarudza Machine Price
Plastic Sheet Kuita Machine Qingdao
Plastic Sheet richigadzirisa Machine
p chemarata shisha extrusion mutsetse
p afoot papepa Machine
p mhango shisha extrusion mutsetse
PP mhango jira kugadzira muchina
PP mhango shisha kugadzira muchina
p chiputiriso bhokisi nokuparira Machine
p chiputiriso papepa nokuparira Machine
p nhovo papepa nokuparira Machine
mapeji Pe PC Hollow Grid Sheet Ndakasarudza Machine
p denga papepa Machine
p papepa Machine
p mapatya rusvingo papepa nokuparira Machine
PVC Flex Banner jira Mfg. Machine
PVC Kutevedzera Marble Sheet Machine
PVC Kutevedzera Marble Sheet Ndakasarudza Machine
PVC Roofing Sheets Kuita Machines
PVC Sheet unhani Machine
PVC Sheet Ndakasarudza Machine Price
PP bhokisi Kugadzirwa Machine
2100mm Pe PP chiputiriso papepa dzaFord
2500mm Pe PC PP chemarata papepa Machine
1100mm PP PC Pe mhango papepa nokuparira Machine
1700mm Pe PC PP mapatya rusvingo papepa nokuparira Machine